Ebube jaket ndị inyom ejiji - elongated, ọkụ, akpụkpọ anụ, nwa, uhie
Ụmụ nwanyị na-akpa uwe jaket - ụdị ejiji kachasị mma na ihe ha ga-eyi?
Ị na-achọ bọmbụ ndị uwe ojii? Ntughari ndi mmadu emeputara otutu ndi mmadu na-adighi nma na ndi na-adighi nma, site n'aka ndi agha ruo ogbe ndi ozo, nke ga-ekwe ka ihe mara mma, n'agbanyeghi ogo na ogo, iji maa mma ma na-adi n'ime ihe.
Nwanyi nke oge a bu ubochi bomb bu nke nwere ike imeju onodi fashionistas. Tinyere jaket ọdịnala site na nylon mgbochi ma ọ bụ akpụkpọ anụ, ejiji bụ ngwaahịa avant-garde nke ụdị ejiji dị iche iche na ụdị akwa ákwà na denim, ma maka oge okpomọkụ na oyi. Ụdị ọkwa dị iche iche nke dịgasị iche iche ka na-ewu ewu, ndị uwe ojii na-aghakwa bọmbụ ndị agha bụ ndị agha, ihe ndị a na-edegharị bụ ọbụna, na-adabere na nkwụsị nke ihe na-enweghị ihe mgbochi.
Kedu agba, nbipụta na ihe ndozi na-enye site n'aka ndị omebe iwu ejiji n'oge a? N'agbanyeghị ụdị, na-emekarị:
nwa na oji; khaki, odo pastel na agba aja aja;
ihe niile na agba ntụ, agba aja aja, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pink na acha anụnụ anụnụ;
na-enwu: "ọlaedo", "ọlaọcha", ígwè na ọla;
cell, strip, peas, floral, predatory, na floral patterns, holography na ethno motifs;
ihe eji eme ihe na ngwa, akara na ihe odide, ụta, ajị, flounces na ihe dị iche iche ntinye, rivets na rhinestones.
Nwa Long Bomber
Hot kụrụ - bọmbụ agbatị agbatị, ogologo ya dịgasị n'etiti etiti ụkwụ ya n'etiti etiti ahụ, jaket oge a na-eru nnọọ n'elu ikpere. Ihe ndị a bụ ihe atụ nke ihe dị mma ma ọ bụ ihe ngwọta na-enweghị isi na eriri ike, ụgbụ na-agbanwe agbanwe nke dị na ala, ma ọ bụ inwe nkwekọrịta dị nro na-agba ume. Ha dị ka cardigans . Na-ewepụ, akwa nwanyị nke bombu nwere nkwụsị nke na-eme ka ọ dị ogologo ogologo oge, ọnụ mmiri na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ, oge okpomọkụ na oge oyi na-emepụta ihe eji achọ mma, mkpọchi ma ọ bụ bọtịnụ.
Bọmbụ akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị
Ageless kpochapụwo - bọmbụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ụmụ nwanyị - nhọrọ zuru ụwa ọnụ maka oge niile n'ihi na ndị hụrụ nke a outerwear . Ihe ndị dị ndụ dị oke ọnụ karịa ndị ibe ha si akpụ akpụ akpụkpọ anụ, ma ha bụ ndị a na-akwanyere ùgwù, ndị bara uru ma na-adịgide adịgide. Olee ihe ọhụrụ?
A naghị enwe ụdị obere akpa n'akpa uwe ha, ma na-abata n'akụkụ ime, akpa ego, ma ọ bụ ha niile n'otu oge ahụ. O nwere ike ịbụ nke ogologo oge ma dị mkpụmkpụ, mgbe niile na mpempe akwụkwọ na-agbanwe ma na-enwe obere ihe.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ọhụrụ nke bọmbụ ahụ nwere ọbụna ịkpụchapụrụ onwe ya, mgbe ụfọdụ, obere eriri (njikọ nke ikuku pilot-bọmbụ) na ogwe aka nke atọ.
Ihe ịchọ mma. Ịgba nká, nhazi laser, ihe na-adọrọ mmasị na mmetụta nke ịka nká nke akpụkpọ ahụ, ihe mkpuchi "ọla edo" nke onwunwu, ọnụ ọgụgụ dị iche iche na ọmarịcha mma, ndị na-enweghị ike ịkwa ụta, jabos vertical na ụlọ, dị iche iche, ntinye ígwè na rivets.
Bomber Akpụkpọ Ụmụ nwanyị
Ngwunye bombu a na-ekpo ọkụ zuru oke na-echebe ya site na ifufe na oyi, anaghị eme ka mmegharị ahụ dị iche iche ma bụrụ ihe dị mma na akwa akwa podnadoevshej. Ejiri nsụgharị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ euro podstezhko na-enye gị ohere iyi ha na ọ bụghị nanị n'oge oyi, kamakwa na oge mgbapụta, na bọmbụ ndị uwe ojii nke oge a nwere nnukwu ngwugwu ma ọ bụ snud nke na-eje ozi dị ka ihe ndozi ọzọ nke ngwaahịa ahụ ma tinye ya n'ubu.
Ihe odide a na-ewu ewu bụ abụọ n'ime otu - ogige-bọmbụ, na obere ihe ngwọta oyi - a na-achọta ya. A na-eme ụdị dị iche iche dị iche iche, okomoko, adịgboroja, na ahịa-ahịa ọ bụghị nanị site na ezigbo akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ nylon, textiles na jeans. Ndị a ma ama na-edozi uwe ha na-acha ọkụ na uwe bọmbụ na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke na ihe ndị na-egbuke egbuke, ihe mkpuchi na ihe dị iche iche, gbanwee akpa ahụ na belt.
Ndabere bọmbụ nke ndị inyom
Jiri anya nwayọọ na mara? Ngwunye bombu Pink, nke nwere mmetụta nke ìhè na nrọ, na ịcha mma, ihe nkiri ma ọ bụ monophonic - ihe ị chọrọ. Ọ na-agbakwụnye mmetụ nke femininity na ịhụnanya ịhụnanya na ihe ọ bụla a họọrọ. Otu jaket na multilayer flounces bụ obere pụrụ iche, nke kwesịrị ekwesị maka eyịm ụbọchị na festive, na ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ jupụtara na bọmbụ bọmbụ na agba aja aja ga-egbukepụ n'oge oyi-oyi ụbọchị izu.
Na mgbakwunye na ụdị pink, na elu nke ewu ewu nke windo na-acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha, na-acha uhie uhie, na-acha anụnụ anụnụ, na-acha agba aja aja, na-acha ọcha ọcha, na njikọ ha. Dị ka ihe ndozi ahụ dị mma:
ihe nhazi nke ahihia;
mmepe emeghe na ihe ntanetị;
gbaa na rhinestones.
Nwa Denim Bomber
Nhọrọ kachasị mma maka ụdị lush na ndị hụrụ denim bụ nwanyị bombu nke nkedo nile nke agba agba si jeans. Ejiri ejiji, ihe eji eme ihe, ihe odide na ihe odide ya, o bu ihe bara uru ma nwee ike ibu ihe di iche iche na ihe oyiyi di iche iche, site na nkwekorita nile nke denim. Ọ naghị arahụ n'azụ ma na-apụnara onwe ya ihe: bọmbụ-ndị soja, ndị na-acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ na ụdị ihe eji emepụta ihe nke velvet ma ọ bụ ihe ndị e ji ede ihe.
Onye ndu nke afo gara aga - otu akwa breeze a na-acha uhie uhie na nke oji nke bombu jiri obi ike banye n'ime oge mgbụsị akwụkwọ ọhụrụ. E ji ihe dị iche iche mee ihe, ha dị ọkụ, mara mma na nwanyị, emela ka ọ dịkwuo arọ karị, ma mee ka ihe oyiyi dịkwuo mfe. Na-emekarị:
monochrome na ụdị akwụkwọ nylon na-acha ọcha, acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
Ngwongwo ogugu ndi ozo nke vinim mere nke denim na aji ahihia; ihe ndị na-egbuke egbuke na nke pastel ndị e ji embossed eke na eco akpụkpọ anụ.
Egwuregwu ndị na-eme egwuregwu na-eme ka ndị inyom na-atụ bọmbụ na-esi na uwe na ákwà. N'etiti ụda bọmbụ baseball, ndị ọkacha mmasị na-enweghị atụ bụ bọmbụ na-acha uhie uhie na-eji aka uwe na akwa uwe, acha anụnụ anụnụ, jaket na-acha anụnụ anụnụ na ịgwakọta ndị agha baseball-agha. Tinyere ihe egwuregwu, na oge a na ihe ndị na-eme ka ihe ndị dị mkpirikpi na-egbubiga egbuke, ndị na-enweghị ụbọkọ roba, na ndị na-agba bọmbụ-ndị na-atụ bọmbụ na usoro ọdịdị ala na-adịghị ahụ anya na ụkpụrụ "peas". Igwe nwere ike ịbụ nnukwu olu na kpochapụwo, sewn na detachable.
Nwa Suede Bomber
Nhọrọ kachasị mma na uwe akwa atụrụ - nwanyị na-ekpo ọkụ na-acha ọkụ ọkụ sitere na mmiri na-acha uhie uhie ma ọ bụ nke na-emepụta - nke a na-achọpụta na ọ dị mma nke afọ. Ọ na-adabara na ụmụ nwanyị na-eto eto ma na-akpachapụ anya na-ejikọta ya na jeans, dị iche iche trouser ensembles, uwe mara mma na skirts, yana na azụmahịa ada . Ụdị agba: aja aja, isi awọ, acha anụnụ anụnụ na bordeaux.
Ụmụ nwanyị na-agba bọmbụ
Ị na - ahọrọ nkasi obi zuru oke - na - ahọrọ bọmbụ nwanyị na - atụ oyi n'oge oyi, nke kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ihu igwe anyị. N'iji ojiji nke fillers, fluff ma ọ bụ sintepon, jaket ndị inyom nke oge a bụ bọmbụ jupụtara na ọ bụghị naanị ọkụ, kamakwa ìhè. Ogologo oge dị iche na-adịgasị iche site na ọkọlọtọ-nke ọma na n'etiti etiti ahụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe dị iche iche, mgbe ahụ ṅaa ntị na ụdị ndị a. Achọpụta na-enweghị atụ na echiche atọ dị iche iche ga-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke fragility nwanyị.
Ihe a na-achọkarị, ma ọ bụghị ikpebi ihe ị ga-eyi bọmbụ nwanyị? Ndị ọkachamara eji ejiji mara na uwe a ga-abụ ihe mgbakwunye na obodo ndị dị n'obodo ukwu ma jiri nlezianya tụgharịa ya na ihe ndekọ nke ndị agha na egwuregwu, ga-enye aka mee ka esemokwu ma ọ bụ ụmụ nwanyị nwere mmekọahụ. A na-ejikọta bọmbụ ndị uwe ojii na ọtụtụ ụdị jeans si akwa na akpụkpọ akpụkpọ na ụmụ nwoke na ndị na-agba chaa chaa, ndị na-emepụta ihe, ndị na-acha ọcha, ndị na-acha uhie uhie, ndị uwe ojii, uwe elu, uwe dị iche iche na ejiji.
A na-ejide uwe na akwa uwe nke bombu n'ụzọ zuru oke na ndị na- enweghị isi na ndị na-agba chaa chaa, ndị na-agba chaa chaa, ndị na-egbuke egbuke, ndị oxfords, ndị na-atụ egwu, ndị na-akụ azụ na ndị na-azụ ahịa. N'okpuru mgbede na mmanya mmanya - akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ, ụgbọ mmiri na-ewu ewu, ihe ndị mara mma, ndị "dike" na akpụkpọ ụkwụ Grik ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ.
E kwesịrị ịhọrọ ngwa ngwa dịka o kwere mee:
Ngwongwo ma ọ bụ kpaa uwe, ma ọ bụ nke a na - ejiji na - oge na - na - na - na - na - na - akpụkpọ ụkwụ, na -
Ogologo oge, ịcha akwa na ịcha akwa;
akpa ọ bụla: ma na ụda na ọdịiche, "ndị dike" na "Lilliputians", ihe bụ isi bụ ịdị n'otu nke ụta a họọrọ na ụda egwuregwu nke ọdịiche.
Kedu ihe dị n'etiti?
Ngwongwo ejiji nke nwanyi a na-ejikota n'omume ga-ejikota uzo di iche iche nke umuaka na uwe na uwe. Exquisitely - a na-ejikarị ekike.
Ndị na-agba chaa chaa na -acha uhie uhie na uwe elu , ogologo na obere lush na skirts warara.
Ndị na-eji ígwè dị iche iche, ndị na-agba bọmbụ na ndị na-ebu ọkpọ.
Ụdị obere na elongated na ọbụna nchara.
Ndị na-atụ bọmbụ baseball na jeans na ezigbo veelvet, akpụkpọ anụ ma ọ bụ uwe mwụda na uwe mgbede.
Akpa ikpeazụ bụ ụta a na-agba ụta: jaket n'elu uwe ma ọ bụ mmiri ozuzo na akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke nwere bọmbụ na-acha akpụkpọ anụ na ihe ndị na-acha odo odo na ọkpụkpụ isi, coyotes na akwa jeans.
Ụmụ nwanyị Dummies Columbia
Ụmụ nwanyị Finnish Jaketị
Eco Coats Naanị m
Obere uwe Luhta - ejiji uwe ndị Finnish maka ndị inyom na ndị ikom
Kedu otu esi ahọrọ anya m?
Kedu mgbe amalitere na nwamba?
Mmiri ara ehi-gelatin
Ahụ na-eyiri afọ
Sinusitis - ọgwụgwọ na ọgwụ ndi mmadu
Mbelata antimulylerov hormone
Chloe Kardashian "jidere" n'aka Beckham
Nest anụ anụ
Angelina Jolie, onye gbagara London na di ya, na-atụ anya na-alaghachi n'ụlọ
Mmiri vitamin erughi
Ngwongwo ụlọ maka ihe mgbakwasa ụkwụ - ụdị
Esi akwụkwọ ahụaja
Ọfịs: Jennifer Aniston na Justin Theroux kwupụtara ịgba alụkwaghịm
Foto kangaroo kachasị mma n'ụwa!